Piramida lehibe K2019 - Rakitra fanadihadiana (2019) - AFRIKHEPRI
Great Pyramid K2019 - Rakitra fanadihadiana (2019)
Rakipahalalana hojerena (Lahatsary)
sabotsy, 11 jolay 2020
De ny lafiny maro, mahafeno fepetra ho "Detail" mihena na latsaka an-tsitrapo an-tsitrapo ain'ireo manampahaizana momba ny tady rehetra. Na izany aza, io mialoha ny antsipirian'ny fanontaniana teoria iray manontolo ary manery antsika hanontany tena amin'ny fomba feno.
"Grande Pyramide K 2019" avy amin'ny talen'ny Fehmi Krasniqi dia fanadihadiana ara-tsiansa tohanan'ny siantifika izay manangona ireo sombintsombiny miafina. Tsy avelany misy kisendrasendra ary entiny fanambarana vaovao tanteraka izay namoaka ny fisalobonana tamin'ny misterin'ny ny fanamboarana ny piramida lehiben'ny Cheops.
Fa tsy izany ihany!
Avy amin'ireo tahirin-kevitra ireo dia mitanjozà singa mampiavaka antsika izay manery antsika mamerina ny tantaran'ny maha-olombelona nandritra ny 5000 taona, raha tsy izany.
Tsy ho toy izany ihany ianao raha tsy mijery ity sarimihetsika ity.
Tsy ho toy izany intsony izao tontolo izao.
Ity horonantsary fanadihadiana ity dia manasa anao amin'ny fanovana revolisiona mbola tsy nisy toa azy.
Miverina any amin'ny ara-panahy Afrikana
Fanadiovana ny ADN - Saint Germain (Audio)
Cybernetika psycho - Dr Maxwell Maltz (Audio)
Harriet Tubman, ilay vehivavy mainty voalohany mipoitra amin'ny volavolan-dalàna 20
Foundation Afrikhepri de Mamorona “rano mandriaka” izy amin'ny dingana iray izay afaka manova ny fambolena: "Ny teknikan'ny asany dia efa vita soa aman-tsara any India amin'ny fambolena voankazo, ny voanjo, ny landihazo, ny vary ..." Jul 8, 19:25
Foundation Afrikhepri de Ny mpianatra Ogande dia mamorona fampiharana finday izay mamaritra ny tazomoka: "Ny mpianatra Ogandey dia mamorona fampiharana finday izay manao diagnosa ny tazomoka." Jul 8, 19:18
Foundation Afrikhepri de Speech of Malcolm X: "Speech of Malcolm X" Jul 8, 19:16
HAMPIKARAKA HIFAMPIANA IZYx